जान्नुहोस् तपाईको जन्म महिना अनुसार तपाईको भाग्य र स्वभाव कस्तो छ ? – Makalukhabar.com
जान्नुहोस् तपाईको जन्म महिना अनुसार तपाईको भाग्य र स्वभाव कस्तो छ ?
मकालु खबर	 २०७६ जेष्ठ ३१ २२:४१ प्रकाशित 78 0
जेठ ३१ । मानब जिवनमा ज्योतिषशास्त्रको धेरै ठूलो महत्व हुन्छ । हामी कुनैपनी धर्मकर्मको कार्य होस् या फेरी केहि कुराको शुभारम्भ गर्नु परोस हामी मध्ये धेरै व्यक्तिहरु ज्योतिषशास्त्र अनुसार गर्ने गर्दछौं । त्यसैगरी शास्त्र भन्छ हाम्रो जिवनमा हाम्रो जन्म महिनाले पनि हामी कस्ताे स्वभाव र हाम्राे भाग्य कस्ताे हुन्छ निर्धारण गरेको हुन्छ । आज हामी तपाईहरुलाई महिना अनुसार व्यक्तिको स्वभाव र भाग्यको बारेमा बताउन जाँदै छौँ।
जेष्ठ: यस महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरु धेरै मेहेनती र उत्तम बुद्धि भएका हुन्छन् । उनीहरु आफ्नो कडा परिश्रम र मेहेनतको बावजुद प्रशस्त धनसम्पति आर्जन गर्न सक्छन।
असार: असार महिनामा जन्मिएका व्यक्तिहरु निकै भाग्यमानी हुने गर्छन र जीवनमा सोचे भन्दा बढी आयआर्जन गर्न सफल हुनेछन्। यस महिना जन्मेकाहरुले थोरै मात्र सुख भोग गर्ने मौका पाउनेछन्।
भाद्र: भाद्र महिनामा जन्मेका महिलाहरुले व्यक्तिहरु निकै सुख र शान्तिको अवसर प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यो महिनामा जन्म लिएका व्यक्तिहरु मिठो बोली र सरल भएका हुन्छन। कडा मेहेनत र परिश्रमका बावजुद यिनीहरुले प्रशस्त धन संचित गर्न सक्छन।
असोज: यस महिनामा जन्म भएका व्यक्तिहरु निकै सुन्दर ,पवित्र मन भएका र धनवान हुने गर्छन। यिनीहरु अत्यन्त दयालु र परोपकारी भावना भएका हुन्छन।
कार्तिक: यस महिनामा जन्मिने व्यक्तिहरु घमण्डी स्वभावका भएपनि निकै धनवान र बुद्धिमानी हुने गर्छन। यस महिना जन्म भएका मानिसहरु भाग्यमा निर्भर हुने र परिश्रम नगर्ने स्वभावका हुन्छन। यिनीहरु अन्य व्यक्तिसँग लामो समय मिलेर बस्न सक्दैनन्।
मंसीर: मंसीर महिनामा जन्म हुने मनिसहरु निकै नरम र भलादमी स्वभावका हुने गर्छन। उनीहरु झुट बोलेको सहन सक्दैनन्। यस महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरुको मन धार्मिक काममा बढी जान्छ । यिनीहरु प्रशस्त धन आर्जन गर्न सफल हुन्छन तर खर्च बढी गर्ने बानीका कारण त्यति धन संचित गर्न भने सक्दैनन्।
पुष: यस महिनामा जन्मेका मानिसहरुको सोच्ने र बुझ्ने क्षमता अत्यधिक हुन्छ। उनीहरु आफ्नो कडा मेहेनत र परिश्रमबाट राम्रो आयआर्जन गर्न सफल हुन्छन। पुष महिनामा जन्म लिएका व्यक्तिहरुले सामाजिक कामबाट समेत ठूलो मान सम्मान पाउन सक्छन।
माघ: यस महिना जन्मिएका व्यक्तिहरुको मन निकै सफा हुने हुँदै अन्य कसैको नराम्रो सोच्दैनन्। यिनीहरु हँसिलो र जिद्दी स्वभावका हुन्छन। माघ महिनामा जन्म भएका मानिसहरुलाई व्यापारमा राम्रो सफलता मिल्ने हुँदा प्रशस्त धनसम्पति जोड्ने मौका मिल्नेछ।
फाल्गुण: फाल्गुण महिनामा जन्मेका मानिसहरु निकै दयावान,धनवान र विद्यावन हुने गर्छन। उनीहरु अन्य कसैको दुख देख्न नसक्ने हुँदा जो कोहीलाई सक्दो सहयोग गर्ने गर्छन। यस महिना जन्मेका व्यक्तिहरु निकै रिसालु स्वभावका भएपनि अरुको दुखमा सधैंब साथ सहयोगका लागि अगाडी बढ्ने गर्छन।
चैत: यस महिनामा जन्मेका व्यक्तिहरु पैसाको राम्रो बन्दोवस्त गर्न सक्ने हुँदा ठूलो मात्रामा धन संचय गर्न सक्छन। चैतमा जन्म भएका व्यक्तिहरुले स्वास्थ्यमा भने राम्रो ध्यान पुर्याउन आवश्यक हुन्छ। यिनीहरु निकै रिसालु भएपनि अरुलाई दया गर्ने स्वभावका हुने गर्छन।
रिहा भए कमेडियन प्रनेश
प्रधानमन्त्री ओलीले भेटे फ्रान्सेली समकक्षी